युरोपका वनस्पति - बीउहरू र विरूवाहरू विक्रिमा - KPR - मालीहरूको क्लब
अचम्मका बुटा तथा रूखहरू
चीसो सहने बुटा तथा रूखहरू
Vitis vinifera टुक्राहरू
हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहोस्
लसुनका प्रजातिहरूको भूचित्रावली
Change language Nepali (नेपाली)
अहिले हामीले अनुरोध र अर्डरअनुसार युरोपका १९ देशहरूबाट ४००० भन्दा बढी प्रजातिका बीउ र विरूवाहरू संकलन गरिरहेका छौं।
अहिले हामीले यी देशहरूबाट संकलन गरिरहेका छौं। अष्ट्रिया, बुल्गेरिया, चेकिया, जर्मनी जर्मनीमा, स्पेन, फिनल्याण्ड, ग्रेट ब्रिटेन, क्रोएटिया, हंगेरी, लिथुएनिया, लेट्भिया, मोन्टेनेग्रो, मासेडोनिया, पोल्याण्ड, पोर्चुगल, सर्विया, रोमानिया, स्लोभेनिया, स्लोभाकिया
तयार गर्छौं। अल्बानिया, बोस्निया र हर्जेगोभिया, बेलारूस, इस्टोनिया, फ्रान्स, स्वीजरल्याण्ड, इटली, कोसोभो, नर्वे, स्वीडेन, युक्रेन
नक्सा ठूलो पार्न क्लिक गर्नुहोस्।
तपाइको अनुरोधमा यी क्षेत्रहरूबाट सवै प्रजातिहरू संकलन गर्न सक्षम छौं। तरपनि हामीले हामीले संरक्षित प्रजाति र सुनगाभाका (Orchidaceae) प्रजातिहरू संकलन गर्दैनौं।
सन् २००२ देखि नै हामीले यूरोपियन प्रजातिहरू संसारभर नै आपूर्ति गर्दै आइरहेका छौं।
यूरोपको भेजीटेरियन मौसम मार्चदेखि अक्टोबर सम्म हो। बीउहरू विशेषगरि अगस्ट र सेप्टेम्बर मा भित्र्याइन्छ। हामी बीउहरूको बीजारोपणका लागि २ बर्षको ग्यारेन्टी दिन्छौं। केही प्रजातिहरू बर्षैभरि पाइएपनि धेरैजसो प्रजातिहरू अनुरोधका आधारमा संकलन गरिन्छ। यदि तपाइ यूरोपमा केही खोजिरहनुभएको छ भने सही ठाउँमा आइपुग्नुभएको छ। हामीलाइ सम्पर्क गर्नुहोस् र जानकारी लिनुहोस्।
हामी बिरूवासँगसँगै बीउहरू, गान्टाहरू, टुक्राहरू र पराग पनि उपलब्ध गराउन सक्षम छौं। हामीले धेरै प्रजातिहरूको खेती गर्छौ र बीउहरू अनि बिरूवाहरू होलसेलमा बिक्रि पनि गर्छौं। यदि तपाइलाइ बीउहरू चाहिन्छ भने अप्रिल भन्दा अगाडि नै गर्नुहोला किनभने बीउहरू अप्रिल मा वितरण गरिन्छ।
हामीले होलसेल बिक्रेताहरूबा लागि छुट पनि उपलब्ध गराउँछौं। अनुरोधका आधारमा सम्वन्धित प्रमाणपत्र पनि उपलब्ध गराउन सकिनेछ।
युरोपियन वनस्पतिको प्रजाति कसरी पाउने
१. निम्नानुसारको विवरण हामीलाइ इमेल (अप्रिलअघि) मार्फत पठाउनुहोस्।
- तपाइलाइ चाहिएको उत्पादन (बीउ, विरूवा, गान्टा, टुक्रा आदि)
- परिमाण (कति पीस, तौल, प्रकार, टुक्रा आदि)
- अन्य कुनै विशेष आवश्यकता छ भने पनि उल्लेख गर्नुहोला।
हाम्रो वेवसाइटमा उल्लेख नभएको कुनै प्रजाति छ भने हामीलाइ ल्याटिन नाममा यसको जानकारी दिनुहोला।
२. हामी तपाइलाइ यी प्रजातिहरूको तालिका पठाइदिनेछौं जुनः
- हामी तुरून्त पठाउन सक्छौं
- हामी तुरून्त संकलन गर्न सक्छौं अथवा आउने समरमा रोप्न सक्छौं
यदि हामीसँग तपाइले खोज्नुभएको उत्पादन रहेछ भने हामी तपाइलाइ इमेलमा मूल्यसूची पठाउनेछौं। यदि तपाइले हाम्रो अफर स्विकार गरी अर्डर गर्नुभयो भने भुक्तानी
३. विशेष अनुरोधको आधारमा संकलन
हाम्रो संग्रहमा नरहेका प्रजातिहरु विशेष अनुरोधमा संकलन गर्न सकिनेछ। तपाइको आवश्यकताहरु हाम्रो डेटावेसमा संचित हुनेछ र संकलन हुनासाथ मूल्यसूचीसहित तपाइलाइ जानकारी गराउनेछौं। मूल्य बीउहरु संकलन र प्रशोधन हुँदा लाग्ने खर्चको आधारमा निर्धारण गरिनेछ। हाम्रो अफर स्विकार भएर भुक्तानी हुनासाथ हामी बीउहरु संकलन गरेर तपाइलाइ पठाइदिनेछौं। यदि हाम्रो मूल्य तपाइलाई स्विकार भएन वा तपाइ यी उत्पादनमा रुचि राख्नुभएन भने केही हुनेछैन मात्र हामी तपाइको अर्डर रद्द गर्नेछौं।
यदि हामीले तपाइको आवश्यकताअनुसारको प्रजाति नोभेम्वरसम्म संकलन गर्न सकेनौं भने हामीले तपाईलाई सूचना गर्नेछैनौं र पनि तपाइको आवश्यकतालाई भने हाम्रो डेटावेसबाट हटाउनेछौं। त्यसकारण, यदि तपाइले डिसेम्वरको अन्तसम्म पनि हाम्रो इमेल पाउनुभएन तर त्यो उत्पादन चाहनुभयो भने हामी अर्को बर्षको समरमा फेरि खोज्ने प्रयास गर्नेछौं। त्यसका लागि तपाइले हामीलाई अप्रिलको अन्तसम्म इमेल गर्नुपर्नेछ।
हामीले संकलन गर्न सक्ने प्रजातिको सूची
खोजेको बीउ वा विरूवा भेटिएन? कृपया आफ्नो आवश्यकताबारे हामीलाइ जानकारी गराउनुहोस्। हामी उपलब्ध गराउन प्रयास गर्नेछौं।
Copyright © 1998-2019 KPR - मालीहरूको क्लब स्लोभाकिया
पछिल्लो पटक परिवर्तन गरिएको 17.1.2019